Amaprotheni ezilwane nemvelo, inhlanganisela eyingozi | Ukuvuselelwa Okuhlaza
Amaprotheni ezilwane nemvelo, inhlanganisela eyingozi
Uma kukhona umsoco obangelwa yimisipha, impela yiwo amaprotheni. Ngempela, kuyisici esikhulu sezicubu zemisipha, iminikelo yayo efanele ukwenziwa nsuku zonke lapho umuntu enentshisekelo kwezemidlalo, lapho efuna ukunciphisa umzimba, noma ukumane anakekele impilo. Ukwehla kwesisindo nokwenza okuvamile kwe-a umsebenzi i-physics empeleni zenza ukwanda kwezidingo zemfundiso.
Lokhu kucabanga kungokwemvelo futhi kuyindaba esemqoka izincomo okunomsoco. Kepha uma sibheka indima yomhlaba yokudla ngandlela thile, ngobukhulu obuhlangene, isimo asilula kangako. Impela, ukubona i- ukuvela kwabantu kanye nomkhuba wamanje wesibalo sabantu emhlabeni ukwandisa iminikelo yabo kumaprotheni ezilwane, ekugcineni kuqala ukudala inkinga.
Ngenkathi i ukuqagela kusiholela kubahlali abangaphezu kwezigidigidi ezingama-9,6 emhlabeni ngo-2050, ukugcinwa kwalolu hlobo lokusetshenziswa kwamaprotheni ezilwane kuyinkinga yemvelo impela. Ngezinga lokusiza, buyekeza ukusetshenziswa kwe- amaprotheni izilwane zibaluleke kakhulu. Ukukhiqizwa kwemfuyo kulawula umhlaba ongamaphesenti angama-70%, kanti ama-40% okusanhlamvu okulinywa emhlabeni wonke enzelwe ukondla imfuyo ehambisa la mazwe.
Leli elinye lamaphuzu abalulekile ukuqinisekisa lesi sidingo esikhulayo amaprotheni isilwane. Kubalulekile ukwandisa ukukhiqizwa okusanhlamvu kulimaze ukuthela kwenhlabathi nokuhlonipha imvelo. Ngokufingqa, ngenkathi abantu abangaphezu kwezigidi ezingama-840 behlushwa indlala emhlabeni, kanye nezigidigidi ezi-2000 ukuntula okunomsoco, uhlelo lwamanje lubeka phambili isivuno samandla esibuthakathaka ukuphendula izidingo ezandayo zamaprotheni ezilwane okulimaza izixazululo zomhlaba, zombili ezinomsoco, ezemvelo nezomnotho.
Ngempela, ngokuya ngohlobo, i- Coste unamandla kwekhalori lezilwane elilinganisiwe cishe liyi-3 kuya ku-9 kilojoule yemifino. Uma sithatha isibonelo senkomo ekhuliswe ngokwemboni iminyaka emithathu ukuhlinzeka ngama-200 kilos we inyama, le nkabi izodla u-1300 kg wokusanhlamvu no-7200 kg wefulawa. Ngokwesilinganiso, amakhilogremu ayi-7 okusanhlamvu ayadingeka ukukhiqiza ikhilogremu elilodwa lenyama ekulimeni imfuyo okujulile. Ngubani othi ukulima, futhi uthi ukusetshenziswa kwamanzi.
La umbhalo amanzi Kuyindlela yokukala ebonakalayo, evumela ukukala amanzi adingekayo ekukhiqizeni ukudla kuzo zonke izigaba, ngokuqondile nangokungaqondile. Phakathi kuka-1996 no-2005, ukugxilwa kwamanzi esintwini kwakukukhulu, ama-92% alokhu ayehloselwe i- ezolimo futhi i ukufuya izinkomo. Ngokombiko owashicilelwa ngo-2010 yi-UNESCO HIE, ukukhiqizwa kwekhilo elilodwa lenkomo kudinga amalitha ayi-15.000 XNUMX amanzi.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » I-Ecology » Ezolimo zemvelo » Amaprotheni ezilwane nemvelo, inhlanganisela eyingozi
Imithombo emisha yamandla engaziwa
Ziyanda izimfudu zasolwandle eFlorida ezinezimila